Part 1: Gịnị windows media ọkpụkpọ nwere ike agaghị akpọ BLU-ray DVD?
Part 2: Gịnị bụ unencrypted Blu-ray discs na ezoro ezo Blu-ray discs?
Nkebi nke 3: Alternative Media Players ka Ohere mgbasa ozi ọkpụkpọ
Blu ray bụ a dijitalụ ngwa anya disk format na-eme ka n'aka na data na-echekwara na ụzọ kasị mma nke mere na onye ọrụ nwere ike na-ele ọdịnaya. N'adịghị ka DVD a Ọkpụkpọ e mepụtara iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe data nchekwa uru nke nwekwara ana achi achi na ọdịnaya a na-echebe ihe karịrị otu ogologo oge. Nke a disk e mepụtara na-eme ka n'aka na DVD format na-superseded na nke kacha mma na-nyere ka onye ọrụ na ụdị nke a nchekwa na a pụrụ ịdabere nakwa dị ka inogide.
Iji zere piracy na ihe megidere iwu ojiji nke media nke e ịchekwa n'elu Blu ray disk ọ na-ezoro ezo nke mere na nanị nkà na ngwá ntụgharị Blu ray egwuregwu nwere ike ijide n'aka na data na-agụ na ndị ọzọ na ase na nke a ida kpamkpam. N'aka nke ọzọ mgbe onye ọrụ na-eme ka n'aka na Blu ray disk na-gbawara na-ọmụma nke mere na ọ nwere ike iji nweta ego ma ọ bụ ụdị ọ bụla nke uru ahụ Blu ray disk kwuru na e decrypted dị ka a disk nwere ike na-egwuri na ọdịnaya nwere ike-ekpughe ọ bụla na-ajụ enweghị ihe ọ bụla nke.
E nwere ọtụtụ iri puku Player na ike-ebudatara na Blu ray disk nwere ike na-egwuri na iji agbakwunyere technology. Nke akụkụ a nke nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma Player na-akwado ndị technology mgbe ọ na-abịa software akụkụ na usoro. Player na-ẹkenam ebe a bụ ndị na-ala nke nkà na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ịgba mbọ hụ na ihe kasị mma e nyefewo ha n'aka ka usoro nakwa dị ka yiri usoro a na- na-egwuri na nke a na-eme ka n'aka na Blu ray nkwado na-enwetara na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ. Nke akụkụ a nke nkuzi ga-emekwa ka n'aka na onye ọrụ na-akawanye ihe kasị mma nke onu nke ndị ọzọ Player ndị a ga-ebudatara kama windows mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka egwuregwu na-abụghị nanị ọkaibe ma ha na-gosiri elu site ndị ọrụ na nke a. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi na nke kacha mma e nyere ka usoro n'elu nke Blu ray ọkpụkpọ a chọrọ na n'elu ihe nile na-arụpụta na-eme na-egwu na ọkaibe na nke a. Ndị kasị mkpa abụọ Player na a ga-eji na-egosi na ikike dị ka ndị a:
Dị ka ndị oke na-egosi na egwuregwu ndị kasị mma n'ihi ya, ọ na-ukwuu-atụ aro ka niile ọrụ iji jide n'aka na Player na-ebudatara ma wụnye iji hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nke si functionalities nakwa dị ka n'ozuzu ebre ikike nke egwuregwu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na egwuregwu na-mgbe dịruru elu site ọrụ na ya mere ha kwesịkwara arụnyere bụghị nanị maka Blu ray-akwụ ụgwọ ma ndị ọzọ na-akpọ nakwa iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe pụta bụ nwetara na nke a. Na akụkụ ikpeazụ nke ndị nkuzi ga-eme ka n'aka na atụmatụ na functionalities na-kọwara na zuru mgbe ọ na-abịa Player na e kwuru na nke a.
Ọzọ dị ike ma dị ebube ọkpụkpọ na e mepụtara iji jide n'aka na DVD format nke ụdị ọ bụla na genre na-egwuri enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. The n'ozuzu functionalities nwekwara otu nke kasị mma na ọkpụkpọ na-emekwa ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma n'ime oge ọ bụla ma ọlị. The echichi na na metụtara ndu nke ọkpụkpọ bụ ihe kasị mma na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọbụna a novice onye ọrụ nwere ike wụnye na-eji ọkpụkpọ na ala na afọ ojuju dị ka ọ na-achọ ọ ọzọ omume ma ọ bụ downloads na onye ọ bụla na ihe ọ bụla ihe e agbakwunyere tupu echichi iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na-enweghị ọtụtụ hassle. Otu n'ime ndị kasị elu atụmatụ nke ọkpụkpọ na-ahụ na a onye ọrụ ahọrọ asụsụ na sobtaitel enweghị na-aga n'ime disk menu nke bụ n'ezie stellar.
15 Atụmatụ na iji mee ka ị a nna ukwu nke Windows 10
> Resource> Windows> Enwere m ike ịkpọ BLU-ray na Windows Media Player?